Fahasalamana | Tantsaha anaty aterneto | November 2019
Ahoana ary nahoana no ampiasaina "Gold Ridomil"
Ity lahatsoratra ity dia manoso-kevitra ny hahafantatra ny zava-mahadomelina "Ridomil Gold", torolàlana momba ny fampiasana azy, ny fepetra fisorohana, ny tombontsoa sy ny fahafahana mampifangaro azy amin'ny zava-mahadomelina hafa. Famaritana "Gold Ridomil" "Ridomil Gold" dia fungicide malaza ho an'ny fisorohana sy fitsaboana zavamaniry. Ampiasaina hiadiana amin'ny fahanterana, Alternaria sy aretina hafa.
Mamolavola aretina vokatry ny fitsaboana: fitsaboana sy fisorohana
Be dia be ny mpankafy karazam-boaloboka, ka manandrana manamboatra an'io vokatra io eo akaikin'ny tranony na amin'ny trano fatoriana. Na izany aza, tsy ny olona rehetra no mahavita manatsara ny vokatra tsara amin'ny fambolena. Raha ny marina, miaraka amin'ny fisian'ny vary varieties dia maro ihany koa ny aretina, ary koa ny bibikely manimba ny voaloboka.
Mamafy voaloboka eo amin'ny lohataona amin'ny aretina
Tomaty Holandey amin'ny anarana Rosiana "Tanya" - famaritana ny hybrid F1
Sariaka mahafinaritra amin'ny tsiro mahafinaritra - Yakovlevskaya pear
Ary tsy misy berry mihitsy, fa voatabia! Ny tombony sy ny tsy fahampian-tsimparitry ny voatabia voatabia "Strawberry" F1
Ny tsiambaratelon'ny fikarakarana ny tokantrano ho an'ny fahagagana Saffron - Calathey Crocate!
Ny fomba hanamboarana paoma ao amin'ny zaridainy
Manao ahoana ny fandiovana ny ririnina amin'ny ririnina?
Karazana endri-javatra nataon'ireo mpandeha tongotra Zubr JR-Q12E.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Fahasalamana